Shiinaha oo u dabaaldegay sanad guuradii 70aad ee aas aaska Jamhuuriyada Shacabka… – Hagaag.com
Shiinaha oo u dabaaldegay sanad guuradii 70aad ee aas aaska Jamhuuriyada Shacabka…
Posted on 1 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Shiinaha ayaa u dabaaldegay sannadguuradii 70-aad ee ka soo wareegtay aasaaska Jamhuuriyada Shacabka iyada oo si weyn loogu soo bandhiggay awoodda millatari magaalada caasimada ah ee Beijing, dabaadegyadan ayaa waxay imanayaan banaanbaxyo aan horey loo arag oo ka dhacaya Hong Kong.
Dhoola tuska millatari ee lagu soo bandhigay fagaaraha Tiananmen ayaa waxaa ka qeyb galay 15,000 oo ciidan, 580 taangi iyo nidaamyo kale oo hub ah, iyo sidoo kale gantaallo isku dhafan oo ka gudba qaaradaha oo lagu soo raray gawaari waaweyn.
Khudbad kooban oo uu jeediyey intii lagu guda jiray socodkii militariga ee ugu weynaa taariikhda jamhuuriyada tan iyo markii la aasaasay todobaatan sano ka hor, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wuxuu carabka ku adkeeyay in Beijing ay tahay inay ilaashadaan nabada iyo amaanka Hong Kong iyo Macao ayna ilaashadaan horumarka nabada ee Taiwan.
Dabaaldegyada ka dhacay Beijing ayaa lagu soo bandhigay gantaalo casri ah, oo ay kujiraan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn oo markii ugu horeysay la soo bandhigay.
“Ma jiro wax awood dumin kara aasaaska ummaddan weyn,” ayuu yidhi Xi, madaxweynaha Shiinaha ee ugu awoodda badan tan iyo Mao Zedong, khudbad ka hor jeediyey munaasabadda. “Shiinaha berri ayaa noqonaya mid aad u barwaaqaysan.”
Kadib markii uu ku yimid limousine, Xi waxa uu soo kormeeray askar iyo hub, oo ay ku jiraan gantaalada ballistic-ga ee loo yaqaan (DF-41) iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn.
Xi wuxuu ku baaqay in la joogteeyo “barwaaqada muddada dheer iyo xasilloonida Hong Kong” iyada oo la raacayo mabda’a “hal waddan, laba nidaam.”